Bakistaan oo Hindiya ku eedaysay weerarkii rugta ganacsiga ee Karaaji - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Bakistaan oo Hindiya ku eedaysay weerarkii rugta ganacsiga ee Karaaji
Shalay ayay ahayd markii kooxda gooni goosadka ee gobolka Balujistaan ee Bakistaan ay sheegteen weerar fuleynimo oo ay ku qaadeen xarunta rugta ganacsiga ee Bakistaan ee ku taal magaalo xeebeedka Karaaji.
Booliiska dalkaasi iyo ciidanka aadka u tababaran ayaa toogtey kooxdii weerarka soo qaaday ayadoo qarna qabatey. Waxase jira dhaawac iyo dad ku dhintey weerarkaas kadib markii ay rasaas ooda uga qaadeen.
”Shikiga ugu horeeya ee aan qabnaa waa Hindiya inay lug ku lahayd weerarka rugta ganacsiga ayuu yiri raiisal wasaaraha Bakistaan Cimraan Khaan. Hindiya ayaa si aada u beenisay inay lug ku lahayd.
Waxa caadi ah in colaada laba wadan ee Ingiriisku u kala jaray Hindiya iyo Bakistaan sanadii 1947 ay midkoodba ka kale ku eedeeyo weerarada ka dhaca dalalkooda. Bakistaana way ku saxan tahay eedeayntan, waxana shaki ku jirin in qas badan oo ka jira Bakistaan iyo jaarkeeda ay Hindiya lug ku leedahay.